Fandaharana 8 hamoronana lalao amin'ny PC na dia tsy fantatrao aza ny fomba fandaharana 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Misy programa mamela anao hamorona lalao na dia kely fotsiny na tsy manana fahalalana momba ny fandaharana. Amin'ity rindrambaiko ity dia azo atao ny mampivelatra lalao multiplatform amin'ny 2D sy 3D, miaraka amin'ireo lohahevitra manomboka amin'ny RPG ka hatramin'ny lalao fanabeazana. Misy safidy maimaim-poana sy karama mifanaraka amin'ny teti-bolan'ny tetikasa.
Playback / kofehy
Twine dia iray amin'ireo fitaovana famoronana lalao izay mila kely na tsy misy fahalalana momba ny fiteny fandaharana. Na izany aza, ny programa dia voafetra amin'ny fampivoarana ny lalao mifototra amin'ny lahatsoratra, izay mamela ny famoronana tantara mifandraika sy tsy tsipika.
Mety ho an'ny traikefa nahafinaritra, filalaovana andraikitra ary thrillers mistery, apetaho amin'ny HTML ny valiny. Manome anao ny fahalalahana hametraka ny lalao amin'ny sehatra samihafa amin'ny alàlan'ny browser. Raha te hanamboatra azy amin'ny PC na rindrambaiko finday avo lenta ianao dia mila mampiasa mpanova.
Curl (maimaim-poana): Windows | macOS | Linux | Malagasy
2. maotera tsy tena izy
Unreal Engine dia mamela anao hamorona ny zava-drehetra manomboka amin'ny lalao 2D tsotra ka hatramin'ny lohateny misy sary miloko 3D. Raha teorika dia mila manana fahaiza-manao fandaharana ianao raha hampiasa azy. Saingy misy vahaolana natolotra ho an'ny vao manomboka, antsoina Plano.
Mahery vaika ilay fitaovana ka azo ampiasaina amin'ny tetikasa sarotra, toy ny averina atao de Final Fantasy VII. Azo atao ny manondrana ny lalao noforonina tamin'ny sehatra samihafa, toy ny PC, lalao video, finday avo lenta, fitaovana virtoaly virtoaly, sns.
Maimaimpoana ny serivisy, mandra-pividianan'ny tetik'asa anao $ 3,000. Avy any, ny mpamorona dia tsy maintsy mandoa 5% amin'ny tombony amin'ny Epic Games, mpamorona Unreal Engine.
Moto tsy mitombina (maimaim-poana): Windows | macOS | Linux
Na eo aza ny fanohanana ny lalao 3D, GameMaker dia malaza amin'ny famolavolana lalao 2D. Misongadina ny programa fa mora ampiasaina ary mamela ny olon-drehetra hamorona ny lalaony. Raha tsy manoratra tsipika kaody, mampiasa ny drag sy drop mekanisma.
Saingy tsy midika izany fa tsy mahay miala voly izay rehetra mahay kaody. Raha ao anatin'io vondrona io ianao dia azonao atao ny manamboatra ny zavaboary amin'izay tianao. Ny serivisy dia mamela anao hanondrana ny valiny amin'ny sehatra maro. Na izany aza, amin'ny sasany dia ilaina ny mandoa vola fanampiny.
GameMaker Studio 2 (aloa, miaraka amina kinova andrana maimaimpoana): Windows | Mac OS
Gamesalad dia safidy tsara ho an'ireo izay vaovao amin'ny tontolon'ny fampandrosoana. Tsy mitaky fahalalana momba ny fiteny fandaharana izany, ahafahanao mamorona amin'ny alàlan'ny mekanika fitarihana sy fitetezana.
Ny rindrambaiko dia miantoka vokatra tsara amin'ny 2D, na dia voafetra aza ny enti-manana. Ilay sehatra dia manana kinova iray natao ho an'ny fanabeazana ihany koa, miaraka amin'ny tanjon'ny fampianarana ny foto-kevitra momba ny fandaharana, ny famoronana lalao ary ny famoronana haino aman-jery nomerika.
Ireo mpamandrika amin'ny kinova Pro dia afaka mamoaka amin'ny sehatra lehibe rehetra toa ny HTML, solosaina ary fitaovana finday.
GameSalad (aloa, miaraka amina kinova andrana maimaimpoana): Windows | Mac OS
5. Mpamorona kilalao
Araky ny anarany, RPG Maker dia fitaovana iray hampivelarana lalao 2D. Lalao anjara. Ny programa dia misy kinova maromaro, manolotra fiasa samihafa. Mampanantena ny RPG Maker VX ho tsotra be ka na ny zaza aza afaka mampiasa azy.
Izany hoe, tsy ilaina ny fahalalana programa mba hampivelarana lalao, sintomina ary milatsaka fotsiny. Ny fampiharana mamela anao hamorona litera, mampiditra mozika sy ny feo vokany, ankoatra ny asa hafa. Ny lalao dia azo aondrana amin'ny HTML5, Windows, macOS, Linux, Android, ary iOS.
RPG mpamorona (kinova andoavam-bola maimaim-poana): Windows
Ny Quest dia fitaovana ahafahanao milalao lalao tantara mifandraika na dia tsy fantatrao aza ny fomba fandaharana. Na dia mifantoka amin'ny lahatsoratra aza ny fifantohana, azo atao ny mampiditra sary, mozika ary ny vokatry ny feo. Ny horonan-tsary YouTube sy Vimeo dia tohanana ihany koa.
Izay manana fahaiza-manao fandaharana dia afaka manamboatra ny endrik'ilay lalao amin'ny fomba tiany. Ny valiny dia azo aondrana amin'ny PC na amin'ny fampiharana finday.
fikarohana (maimaim-poana): Windows | Malagasy
Ny firaisankina dia safidy iray ho an'ireo izay mahalala fandaharana. Maimaimpoana ho an'ireo mpampiasa vola karama latsaky ny $ 100.000 isan-taona, mamela anao hamorona lalao 3D misy sary manaitra ny rindrambaiko.
Ny programa dia manana fitaovana enti-miaina, feo ary horonan-tsary, mampiditra effets, jiro ary maro hafa. Ny asa dia azo havoaka amin'ny sehatra samihafa, toy ny PC, finday, lalao video ary fitaovana VR sy AR.
vondrona (maimaim-poana, miaraka amin'ny safidin'ny drafitra voaloa): Windows | macOS | Linux
Kahoot dia tsy tena sehatra fampandrosoana, fa mety hahasoa an'ireo te-hamorona lalao fanabeazana tsotra. Mamela anao hamorona ilay tranonkala fanontaniana, dinamika marina na diso, Puzzles, ankoatry ny loharano hafa hampiasaina amin'ny kilasy virtoaly na mifanatrika.
Azo atao ny mametraka ny isa isa ary mampiditra fameram-potoana, mba hahatonga ny lalao ho mahafinaritra kokoa sy hifaninanana. Ny zava-drehetra dia aseho tsirairay amin'ny efijery ataon'ny mpianatra tsirairay, na amin'ny alàlan'ny fampiharana natokana na amin'ny pejin-tranonkala misy ny serivisy.
Kahoot! (maimaim-poana, miaraka amin'ny safidin'ny drafitra fandoavam-bola): Web | Android | ios
Inona ny programa tokony hampiasaina hamoronana lalao?
Ny zava-drehetra dia miankina amin'ny fahaizanao, tanjonao ary karazana fitaovana anananao.
Misy fitaovana manolotra lalao efa vonona efa vonona, toa ny Kahoot, fa ny hafa kosa mila fahaizana amin'ny fiteny amin'ny programa, toa ny Unity. Alohan'ny hisafidianana dia tokony handinika ny fahaizanao mamolavola sy mandahatra ianao.
Ny programa vonona ny lalao dia mety amin'ny olona tsy te hampiasa vola amin'ny asa fivelarana. Ireo izay manana fahaizana mamorona amin'ny alàlan'ny fanindriana sy fisarihana entana ao anaty lalao dia mitaky kely fotsiny amin'ny tsy fahazoana ilay lohahevitra.
Na dia mora ampiasaina aza dia manome fahalalahana mamorona bebe kokoa sy singa fanaingoana izy ireo. Safidy tsara ho an'ireo izay te hianatra programa sy hampiasa vola amin'ny tontolon'ny lalao. Ity no tranga misy amin'ny GameMaker Studio 2 sy Quest.
Tsara ny manamarika fa ny ankamaroan'ny programa, eny fa na dia ireo manana loharanom-pahalalana ho an'ny vao manomboka aza, dia manana loharanon-karena ho an'ireo izay mahay amin'ny fandaharana. Ireo mpampiasa ireo dia afaka mikaroka bebe kokoa ireo safidy, manamboatra endrika saika ny lafiny rehetra amin'ny lalao.
Ilaina ihany koa ny mandinika ireo fitaovana tokony hamboarinao. Alohan'ny hanombohanao misintona ny programa dia tokony hojerenao raha mahafeno ny fepetra farafahakeliny ny solosainao. Zava-dehibe ny fanananao fitaovana izay mamela anao hiasa tsy misy olana ary tsy misy tsy fahombiazana.
Raha tsy izany dia fidio rindrambaiko maivana kokoa miaraka amin'ny loharano vitsy na fitaovana an-tserasera. Amin'izay, farafaharatsiny, afaka manao izay tianao ianao.
Te hamorona lalao miorina amin'ny tantara ve ianao sa tianao ny lalao 3D FPS? Avy eo dia ilaina ny mamakafaka ireo loharano atolotry ny programa, mba hahazoana antoka fa hanome ny vokatra tadiavina izy.
Raha manana fampiharana manokana ilay lalao tianao hamboarina, dia amporisihinay ianao hisafidy azy. RPG Maker, ohatra, dia manolotra fiasa manokana ho an'ity karazana fitantarana ity, izay mety tsy ho hitanao amin'ny fitaovana hafa. Na ho hitanao amin'ny fomba tsy dia manintona loatra izy ireo.
Ary koa, zava-dehibe ny manamarina raha manondrana ny lalao amin'ny sehatra irina ny rindrambaiko. Tsy misy dikany ny famoronana lalao feno ary avy eo hahitana fa tsy azo lalaovina amin'ny finday na headset VR.
Ahoana no fomba hamoronana rindranasa nefa tsy mahalala programa? Mahita fitaovana mahatalanjona
Fampiharana andrana amin'ny fahafinaretana sy fianarana amin'ny fotoana iray
Fampiharana lojika hampiofanana ny fisainana sy ny fitadidiana